Ijikwa Ike nke Social Media - Machị 16th, Tampa | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 13, 2010 Satọde, Febụwarị 13, 2010 Douglas Karr
Gbanyụọ ikiri ụkwụ nke njem na-aga nke ọma na New Orleans ikwu okwu na Nzukọ Webtrend na-eme 2010, A kpọrọ m site Jeremy Fairley ịnọdụ ala na panel na Mahadum Tampa maka Ọchịchị Ndị Isi.
Mụ na Jeremy nọrọ obere oge mgbe ọ na-ebupụta usoro ịde blọgụ ya na Tampa na amatala mmemme ya na mba. Ọ ghọtara otu esi akpali ndị otu ya, tụọ nsonaazụ ya, ma gaa n'ihu na-emezi atụmatụ ya. Ana m atụ anya ịchụkwudo!
Nri ụtụtụ ga-atụle Ijikwa Ike nke Social Media maka Azụmaahịa. Nke a bụ ozi sitere na saịtị gọọmentị:
Isiokwu nke Social Media dọtara uche nke azụmahịa ụwa na 2009. Ọtụtụ nzukọ ọmụmụ na mkparịta ụka n'ịntanetị zara ajụjụ a: "Gịnị bụ Social Media?"
Mkparịta ụka panel a na-ebuli mkparịta ụka ahụ n'ọkwa dị elu site na ikpokọta ndị ọkachamara na Social Media ga-aza usoro ndị ọzọ iji zaa ajụjụ a dị oke mkpa: "Olee otu m ga - esi jiri ike nke Social Media mee ka azụmahịa m nwee ihe ịga nke ọma?" Mkparịta ụka a ga-emeghe site na a Tampa Bay nzukọ Social Media akụkọ ọma, ma soro onye nduzi duzie ya na ndị ọkachamara ga-elekwasị anya na ihe ịga nke ọma dị mkpa na iji Social Media. Ọzọ, ala ga-emeghe maka ajụjụ ndị na-eso nzukọ ọmụmụ ihe.
Ga mkparịta ụka a ga-enye ndị isi azụmaahịa ike ijide uru pụrụ iche nke Social Media iji mee ka ọnụnọ ụlọ ọrụ dị na ahịa. N'ime isiokwu ndị ọzọ, panel ahụ ga-ekwupụta: otu esi eji usoro mgbasa ozi nke ọma; otu esi agwakota ojiji nke otutu ihe ntanetị mgbasa ozi; ihe mmadụ mgbasa ozi nwere ike B accomplishGH accomplish mezuo; ego ole Social Media na-efu; otu esi tụọ ihe ịga nke ọma; otu esi eji Social Media na gburugburu B2B na ihe ga - eme n’ọdịnihu maka mgbasa ozi Social Media.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ akwụkwọ sitere na mpaghara Tampa Bay ma ọ bụ Bradenton, aga m efega ụbọchị ole na ole tupu mụ na ndị mụrụ m nọrọ (na Bradenton) Biko mee ka m mara ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ izute - M ga-ede akwụkwọ tiketi n'oge na-adịghị anya!
Tags: Chọọ MarketingWordPress
Bụrụnụ ndị na-udi nke Choice